Diwangalinta ururada oo la kordhiyey
7 Dec 7, 2012 - 11:29:56 PM
Guddiga Doorashooyinka Puntland ayaa maanta 08 December,2012 ku dhawaaqey in muddo saddex todobaad ah lagu kordhiyey wakhtiga ay xirmeyso diiwaangelinta ururada iyo axsaabta siyaasada Puntland oo horey u ahaa 10-ka bishan December,2012.
Gudoomiyaha Guddiga KMG ee Doorashooyinka Dr.Maxamed Xasan Barre ayaa ku dhawaaqey arrintan ,waxana uu amaanay habka ay u socdaan u gudbiadda nidaamka axsaabta badan Puntland.
Ka sokow Ururka Horseed ee talada haya haatan Puntland waxa jira ururo kale oo dhowaan looga dhawaaqey Bossaso iyadoona la filayo in kuwo kalena ku soo biiraan saaxada siyaasada Puntland si loo dhamaystiro geedi socodka looga baxayo nidaamka wax ku qaybsiga Qabiilka.
Haddaba Warsaxafdeedka ay guddiga doorashooyinka maanta ay soo saareen ayaa qornaa sidatan
Ujeedo:Kordhinta Mudada Diiwaangelinta Ururada Siyaasadda Puntland.
Markuu arkay :u heelanaanta iyo abaabulka ballaaran ee bulshadu wado si ay u furato ururro siyaasadeed,
Guddiga doorashooyinka ee kmg ah fadhi rasmi ah oo uu yeeshay khamiista oo taariikhda ay ahayd 6 December 2012,wuxuu go'amaiyey in la kordhiyo mudada diiwaangelinta ururada siyaasadda ee Puntland laguna daro saddex toddobaad oo ku eg 31 December,2012,guddigu wuxuu cadaynayaa kordhintan wax saamayn ah kuma yeelan doonto hanaankii iyo Roadmap-kii horay loo soo bandhigay.